Wararka Maanta: Khamiis, Mar 22, 2012-Ciidammo fara badan oo Kenyaati ah oo saakay lasoo dhoobay Soohdinta ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya
Ciidammo fara badan oo Kenyaati ah oo saakay lasoo dhoobay Soohdinta ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya Khamiis, Maarso 22, 2012 (HOL) — Ciidammo aad u tiro badan oo Kenyan ah isla markaasna ku qalabeysan Taangiyo iyo gaadiidka dagaalka ayaa saaka soo buux-dhaafiyay soohdinta ay Kenya la wadaagto Soomaaliya ee dhanka gobollada Jubooyinka.
Ciidamadan katirsan Militariga Kenya oo qaarkood ay keenayeen diyaarado nooca Hlicopterska loo yaqaan ayaa saaka lagu arkay halka loo yaqaan Xaarxaarka oo 7km u jirta deegaanka Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in ciidamadani ay qeyb ka yihiin ciidamo ay dowladda Kenya Dhawaan ballan qaaday in ay ku biirineyso xoogagga AMISOM ee howlgalka ka wada Soomaaliya.
Ciidamadan cusub ee saaka loo soo daadgureeyay dhanka Soomaaliya ayaa la sheegay in guutooyinkoodii ugu horeeyay ay ku kala baxeen wadooyinka kala aada dhanka Degmada Afmadow iyo Badhaadhe, halkaasoo ay ku yaallaan saldhigyo ay leeyihiin ciidamada dowladda KMG iyo kuwa Kenya ee dagaalka kula jira Xarakada Al-shabaab.
Dowladda Kenya oo ay ciidamadeedu soo galeen Soomaaliya bishii Oktoobar ee sanadkii tagay si ay ula dagaalamaan xoogagga Al-shabaab, ayaa dhawaan kamid noqotay ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ee howlgalka ka wada Soomaaliya.
Khamiis, Maarso 22, 2012 (HOL) — Ilo wareedyo ku sugan degmada Xudur ayaa u xaqiijiyay HOL in cutubyo ka tirsan ciidamada DKMG ah iyo kuwa Itoobiya ay la wareegeen xarunta gobolka Bakool iyadoo aysan dhicin wax dagaallo ah. Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliland oo sheegay inay Wadahadal la galayaan DKMG ah ee Soomaaliya 3/22/2012 2:18 AM EST